सात जिल्ला कोरोना संक्रमण मुक्त | Kendrabindu Nepal Online News
30730571 957152 7414559 22358860
२४ श्रावण २०७७, शनिबार १८:५०
काठमाडौं । गत २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ६२ जनासहित देशका विभिन्न जिल्लामा ३ सय ७८ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा शनिबार मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले गत २४ घण्टामा कोभिड–१९ बाट तीन जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिए । हालसम्म कोभिड–१९ बाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ७३ जना पुगेको छ । उनले भने–‘सक्रिय सङ्क्रमित छ हजार २ सय ६ मध्ये प्रदेश नं १ मा ४ सय ७८, प्रदेश नं २ मा २ हजार ९ सय २९, वाग्मती प्रदेशमा १ हजार २९, गण्डकी प्रदेशमा २ सय ४२, प्रदेश नं ५ मा ३ सय ९०, कर्णाली प्रदेशमा १ सय ६३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ सय ७५ सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् ।’
हालसम्म विश्वभर १ करोड ९५ लाख ४९ हजार ९ सय १ कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित छन् । ७ लाख २४ हजार १ सय ८६ व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ र १ करोड २५ लाख ७० हजार ६ सय ३१ व्यक्ति यस रोगबाट निको भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा ७ हजार ७ सय ८८ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए । हालसम्म जम्मा ४ लाख ३५ हजार २ सय ८९ परीक्षण भएको छ । क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिको सङ्ख्या १० हजार ७ सय ९२ छ ।
गत २४ घण्टामा कोरोनामुक्त भई घर फर्किनेको सङ्ख्या ४ सय ९९ जना छन् । हालसम्म डिस्चार्ज हुने १६ हजार ३ सय १३ छन् । पीसीआर ७ हजार ८ सय ८८ जनामा परीक्षण गरिएको छ । सङ्क्रमितको शून्य सङ्ख्या भएका जिल्ला खोटाङ, धनकुटा, सङ्खुवासभा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्ला रहेका छन्–रासस
Prevराष्ट्रिय गौरवका २४ आयोजना : कुनको प्रगति कति ? (भिडियोसहित)
कतारमा १८ नेपालीसहित कोरोनाबाट १८२ जनाको मृत्युNext